Malunga Nathi - Shanghai Lungisa Ihotele Supplies Co., Ltd
S hanghai Lungisa Textile Limited, njengoko ngokukokelayo kunye namalaphu hotele professional umenzi e East China, siya ingqalelo kule ndawo ngaphezu kweminyaka eli-15. Eziphambili iimveliso zethu kuquka: nezokulala ihotele, iitawuli ehotele, izinto eziluncedo ehotele, F & B nelineni. Thina nikeza solutions lokuthunga epheleleyo amaqela ehotele, moya, iinqanawa, nasezibhedlele.
T hrough arhente yethu ehlabathini lonke yaye abasasazi, ngoku kubonelela lokuthunga kumaqela hotele ezininzi kwihlabathi edumileyo, ezifana InterContinental, Marriott, UHilton, Starwood, Hyatt, Shangri-la njll zokuthengisela kumazwe angaphezu kwama-25.
O ur ofisi ukuthengiswa kunye nenkonzo kwempahla neenkonzo ibekwe kwisixeko Chinese mihla - Shanghai, noseko yethu nokuveliswa kwiphondo Central China. It kusixhasa ixabiso eliphantsi inkonzo eliphezulu ukusebenza.
M kwezi kweminyaka eli-15 yamava ehotele unikezelo, iminyaka 10+ umsebenzi iindwendwe textile mveliso umsebenzi, nto leyo eya kukunceda inkonzo intengiso best, umgangatho ezizinzileyo kunye nexabiso kukhuphiswano. Sijonge phambili ukuba win-win Intsebenziswano kunye abasasazi, abameli, amaqela ehotele ehlabathini lonke!